Altered Carbon. Netflix might have had its cult sequence. What to look at in 2021? – Quick World Information – Samoa News
Ikhabhoni eguqukileyo. Iminyaka emininzi, olu luhlu luya kuhlala likuluhlu lwam oluphezulu lwe-10 kunye ne-5 ephezulu ye-sf. Ndiyazi ukuba unabaninzi abathandayo, kodwa baninzi, ubuncinci abaphulaphuli. Impikiswano ibangelwa kukungachani kothotho ngokunxulumene nencwadi. Ukongeza, iNetflix yaphinda yabonisa ubuso bayo oburhabaxa kwaye yarhoxisa iprojekthi emva kwexesha lesibini. Kuninzi ukubhala, kodwa ndiza kugxila kwezona zinto zibalulekileyo.
Uthotho lweCarbon eguqulweyo
Into endiyibhalayo yimvakalelo yam njenge fan ye-sci-fi yabo bonke abalinganiswa. Ayinamsebenzi nokuba ngumdlalo, incwadi, imovie, uthotho, i-anime okanye umculo womoya. Uthotho Ikhabhoni eguqukileyo yinto ephezulu ye-sci fi. Inani lezalathiso kwimixholo yeengqungquthela, ezixoxwe ngeendlela ezahlukeneyo zonxibelelwano ezichazwe ndim, zikubetha emadolweni. Ndiyabuhlonipha ubunzulu bemephu yelizwe elizayo. Umzuzwana, ubuchule bokudubula, imisonto, ukunciphisa isantya kunye nokukhawulezisa isenzo. Ewe-olu luchungechunge lwehlelo kum. Kwaye sithetha ngemveliso encinci (2018-2020).
Ndiyakwazi ukuqonda ukusabela okupholileyo kwababukeli abo i-sci-fi ingeyiyo eyona leitmotif kulonwabo olufunwayo. Kodwa andisiqondi isililo sabo bacinga ukuba olu luhlu lubuthathaka kuba ayisiyiyo kanye le ncwadi. Ndizifundile zonke iincwadi kuthotho kwaye ndicinga ngokuchaseneyo. Umoya wonke wencwadi uhanjiswe ngokugqibeleleyo. Kwaye ukuba kukho ukungalunganga okuncinci okanye okukhulu? Makhe siqwalasele ukuba ngaba umjikelo oxakekileyo unokudluliselwa kwizikrini. Kulungile hayi. Kwaye ukuba bekukho imveliso, umbukeli ngamnye kuya kufuneka anikwe iphakheji enkulu yeziyobisi ukuze kuhlolwe, kungenjalo bekungayi kubakho ukubukela.
Ikhabhoni eguqulweyo- leitmotif
Ke ukungafi. Lo msonto ubambe wedwa uya kunika nabani na ofuna ukubonakalisa kuwo, iiyure zolonwabo kunye nengqondo yakhe. Kwaye indlela eya kukungafi (enxulumene nomthombo wempahla eluhlaza) ithatha iiyure okanye iintsuku. Ngokwenene, kunqabile ukuba nomxholo ophambili onje kumdlalo bhanyabhanya okanye kumabonwakude. Kodwa ayipheleli apho!
Ikhabhoni eguqukileyo- amabali amancinci
Ngokuchasene nokubonakala, la mabali amancinci ayizigebenga xa kuthelekiswa nemisonto evela kolunye uthotho. Amabali amancinci kuphela kuba sithelekisa isikali nomxholo kuthotho Ikhabhoni eguqukileyo. Ubukrelekrele bokufakelwa oboniswe kolu ngcelele ngeenkcukacha kunye nokwahluka yinto ebalulekileyo kwi-cinematography. Umsonto wothando ngokuhamba kwexesha, ngaphezu komgama ukwinqanaba elinqabileyo. Zininzi iingqondo ezifanayo kwimizimba eyahlukeneyo. Impembelelo yokungafi kubuntu. Iindlela zokuxuba. Ukuzonwabisa kwikamva. Ukusetyenziswa kweengqondo ezingenamzimba. Ukwahlulwahlulwa kwentlalo njalo njalo… Oku kunokujongwa kwaye kuhlalutywe kwakhona kaninzi.
Ikhabhoni eguqukileyo-isifundo sokubambela
Unokuziva ngokucacileyo ukuba yimalini umdlali anokuyizisa okanye anokuyithatha kwimveliso ayinikiweyo. Ngexesha loku-1, ngokoluvo lwam, sinobuhle ngakumbi kwaye sibonisa ngcono iimvakalelo zomlinganiswa odlalwa kwinto eyenzekayo kuthotho. Kwixesha lesi-2, sinomdlali othambileyo. Kunzima kakhulu ukuziva iimvakalelo zomlinganiswa ngamanye amaxesha. Njengokuba idlalwe kwinqaku elinye. Esinye sezizathu zokuziva kwam kukuba uJoel Kinnaman (ixesha loku-1) unelizwi elibhengezwe ngakumbi kuno-Anthony Mackie (ixesha lesibini). Andimbandakanyi uWill Yun Lee, owayedlala umlinganiswa ophambili ngezizathu ezibini: iindima zazincinci, kwaye wadlala kakuhle kuwo omabini amaxesha onyaka.
I-Carbon etshintshiweyo-iNetflix ayinakuze ifike ..
Andazi ukuba kutheni ndihlala ndizikhohlisa oko INetflix mhlawumbi ufuna ukuba kwiphothifoliyo yayo imveliso enje: Umdlalo weZihlalo zobukhosi (HBO) okanye I-Prime Prime yaseAmazon. Eyona SF Series? Yintoni omele uyibukele ngo-2021? (IAmazon). Ukuba kunjalo, ke iNetflix yenza yonke into ukuba ingaze ifumane laa ma-1 aphezulu.Umgaqo-nkqubo wabo wokususa uthotho lwexesha loku-1 okanye lesi-2, kuba izithuba azidibani ngokupheleleyo, iphambene. Kwaye umgaqo-nkqubo owongezelelweyo owenziweyo wokuba la manqaku anokufumana kuphela amaxesha ama-3 athathwe esilingini (kwaye agqwese). Mhlawumbi imivalo ichanekile, kodwa iNetflix iya kuhlala iphakathi.
Ikhabhoni eguqukileyo-uninzi lweempawu ezinomdla
Ukudwelisa nokuchaza abalinganiswa endibathandayo, kungandithatha ixesha elide ukwenza ibali elifutshane. Ke, ngokubanzi, ndiza kuthi-isityebi, ilungile. Okungakumbi ukuba umlinganiswa onikiweyo angadlalwa ngabadlali abaliqela (ukusuka ebantwaneni ukuya kuluhlu lwabantu abadala). Ke – wow.
Kukwafanelekile ukukhankanya iphalethi elungileyo yokwenyani yabalinganiswa “abangalunganga”. Kwaye ngokubanzi malunga nephalethi enkulu yabantu abadweliswe kolu ngcelele.
Ikhabhoni eguqulweyo- iziphumo azikho kuphela
Iziphumo ayisiyiyo kuphela into enokubonelelwa lolu ngcelele. Umculo ongasemva okanye isandi “asibonakali” kakhulu kuba sigqunywe ngetoni yokutya okuluncuthu okubonakalayo. Kodwa mandikuxelele ukuba lo ngumsebenzi osemgangathweni ophezulu kakhulu owenziwe kolu luhlu. Into yesibini eyandichukumisayo zizitalato ezigcwele ngabantu. Kwaye iveliswe ngokugqibeleleyo. Ubungcono kuneCyber ​​Punk. Ezo zinto zikumgangatho ophezulu ezipholileyo kumdlalo Ikhabhoni eguqukileyo kuninzi okungakumbi. Ndiyabulela kuko konke oku, kulula ukuba uzive umhlaba.
Sele ndibhalile malunga nomdlalo obuthathaka kancinci (okanye umdlali okhethwe kakuhle) weqonga u-Anthony Mackie. Enye into kukuba ngexesha lesibini umlinganiswa ophambili wangena kulwalamano lothando-olubuyela umva kakhulu. Xa sinezenzo 10/10, ibuya ngaphambili amaxesha ngamaxesha Ikhobokazana likaIsaur. Oku konakalisa ulwamkelo lwam kancinci. Ukuchaneka: Ndithetha ngobungakanani kwaye ayisiyonyani ngokwayo.
Ikhabhoni etshintshiweyo- kutheni ababukeli bengenakukhohliswa
Ngumnqweno wam lowo. I-LGBT.
Ukutshintsha kweCarbon-Ukulinganisa kwabagxeki kwiindidi ezahlukeneyo “ezimiselweyo”
Zizinto ezikhohlakeleyo. Uxolo ngolwimi, kodwa into enje kunzima ukuyifumana-nakwizimvo zabasebenzisi abaqhelekileyo. Ngapha koko, oku kuyenzeka nakwezinye iimveliso ezininzi. Esi sisizathu sokucinga reTraceX ukubhala ixesha elide uphononongo lweemovie apho umntu (kule meko mna) eya kubhala KUTHENI ethanda into okanye into engazifanisiyo nomdlalo bhanyabhanya okanye uthotho.
Ikhabhoni eguqulweyo-ufuna ukubukela kwakhona kwiminyaka emibini
Inkulu. Ngelixa ndibhala olu hlaziyo, ndibukele olu luhlu okwesihlanu (ndigqibezela ixesha lesibini).
Ikhabhoni etshintshiweyo-uvavanyo lokugqibela
Yishelufa ephezulu ye-sci fi kwaye ndinokuyincoma kuphela. Akuyi kubakho 10/10 ngezizathu ezichazwe apha ngasentla kodwa kuya kubakho ireyithingi eyomeleleyo nangona kunjalo.
I-reTraceX ivavanya: Ngokuqinisekileyo ndiyacebisa.